Ogaden News Agency (ONA) – Guusha way noo muuqataa anaga
Guusha way noo muuqataa anaga
Waxaa laga yaabaa inay dadka badankii u qaataan cinwaankan Riyo-maalmeed. Hasa ahaatee qofkii leh aragti-fog (basiira) waxyaaba badan ayuu ka dhex arki karaa siday arimaha u socdaan.
Ugu horeyn, waxyaabaha tijaaribta lagu ogaaday waxaa ka mid ah, in dheefta la helo dhib dabadii. Guushana ay timaado marka inta badan ay ka quustaan. Arintaasi ma’aha wax iska dheh ah ee waa sunada nolosha uu Ilaahay u jideeyay dadkii ku jira halgan/jihaad. Taariikhda mid dhow iyo mid fogba hadaad dib ugu noqoto waxaad ka heli arima badan oo kuu ifinaya in marka lakala miirmo oo dadka intiisa badan ay ka quustaan guusha oy dib ugu noqdaan adoonsigii iwm inuu Ilaahay siiyo guusha inta soo hadha ee mintidka ku ah hadafkoodii. Taariikhda fog iyo midda dhow aan tusaale ka soo qaadano ka dibna aan ku xidhno waaqica halgankeena iyo meesha uu marayo.
Waxaan la soconaa dagaalka loo yaqaano –God Qodashadii (Al-Khandaq) ee lagu soo qaaday Madina magaaladii Rasuulka CS 5sano ka dib socdaalkii uu ku yimid halkaa Rasuulka CS. Dagaalkaa waxyaaba badan ayaa laga faa’idaystay oy ugu horeyso in 3ex ay u kala jabeen reer Madina. Qaar yidhi; Aaway guushii naloo yaboohay? Kuwaas oo cabsi darteed meelna qaban waayay oo lahaa been iyo dhalanteed ayaa naloo sheegayay oo waatan aan kor uga bixi la’nahay magaalada. Qaar munaafiqiin ahaa oo hoosta kala socday gaaladii Quraysh oo markay arkeen cududda ciidanka soo hor dhoobtay magaalada ku farxay oo lahaa maanta waa kamadambaystii muslimiinta. Iyo qaar yidhi; Waaba tan guushii uu Ilaahay noo yaboohay oo intay guntiga xidheen godka ku soo meegaaray magaalada ka dibna dhufayska adkeeyay iyagoon shaki ka qabin hadaladii rasuulka CS uu ku yidhi ee ahaa waxaa la’ii dhiibay furayaashii boqortooyada Yemen, Shaam, iyo Iraan. Ugu dambayntii, markay kala yaaceen is-bahaysigii ku soo duulay magaalada Madiina ee doonayay inay tirtiraan muslimiinta, wuxuu yidihi Rasuulka CS maanntaa ugu dambaysa duulaan ay soo qaadaan. Hadda wixii ka dambeeyana anagaa ku duulayna. Sidaa umbayna u dhacday ilaa laga furto Makka.
Waxaa quraanka ku badan iyadoo asaxaabtii la socotay Rasuulka CS la leeyahay arintu waa sidaa oo guusha lama helo ilaa dadka lakala saaro ee adkaysta;
(أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألآ إن نصر الله قريب ) صدق الله العظيم.
Hadaan yarehe jaleecno kacaankii shacabka Eritrea, oo hal gumaysi inawada haystay, halgankana aan meel kaga wada jirnay intii ka horeysay jabkii ciidamadii Mingisto oo iyagana ay ku xoroobeen anagana aan gacanta u sii galnay kuwii Wayaanaha ahaa ee la dagaalamayay Mingisto, waxay soo mareen waqtiyo ay dadkooda ka quusteen guusha oo intoodii badnayd ay isu wada dhiibeen Itobiya oy aamineen in aan laga adkaan karin, gaar ahaan markuu Ruushkii u wareegay dhanka Itobiya oo ciidamo ka socda Cuba iyo Yemen-tii Waqooyi ay dagaalka la soo galeen ciidamadii Itobiya. Waqtigaa isaga ah waxay qaateen xisbigii EPLF go’aan taariikhi ah oo ahayd inay dib uga gurtaan dhamaan dhulkay qabsadeen oy isugu ururaan magaalada Nakfa oo kali ah. Waxayna halku-dhig u qaateen marka ay arintu xumaato oo caalamkoo idil uu barbar ka maro in aan la aamini karin cid aan ahayn dadkooda mintidka ah (They believe that when the chips were down, there was no one to trust but the Eritreans themselves.). Taaso ka dhigan Isku-Tashiga aan go’aansanay. Midaa umbayna ku gaadheen reer Ertreeya guushii 10 sano ka dib.
Waxaa ku kala miirmaya halganka ka socda Ogadenya shacabkii lahaa qadiyadda. Qaar badan oo sheeganayay inay ka mid yihiin shacabka halgamaya ayaa dhalanteedka socda ay weysada kaga jabi oo qaylada gumaysiga iyo brobagaandadiisa aan ka adkaysan karin. Waxaa jirtay waa uu Cabdi iley ka mid ahaa xubnaha ONLF ee Dhagaxbuur (Akhri hoos F.G.). Sidoo kale Ibraahim dheere uu qabay tuute dagaal oo caalamka meel walba ka lahaa waxaan ahay mujaahidka 1aad ee xoreyn doona masaajidka Harar. Oo Doolaal lahaa waxaan ahay mudanayaasha ONLF ee loo doortay baarlamaanka. Oo qaar kaloo badan ay ku dhex jireen halganka. Intuudaaba lama odhan karo waxay ahaayeen khaa’imiin ku dhex jiray halganka. Hasa ahaatee, mid walba wuxuu u adkaysan waayay un imtixaanka Rabaaniga ah ee lagu kala saarayay qofka mudan guusha iyo midkaan mudnayn.
ONLF way guulaysanaysaa inta ay ku taagan tahay wadada xaqqa ah, waxaana midhaha guusha guranaya aduun iyo aakhiraba qofka rumaysan qadiyadiisa xaqqa ah.
Haba yaraatee waxba kuma soo kordhin doonto saaxada halganka dacaayadaha gumaysiga uu abaabulayo ee loola jeedo in dadweynaha lagu jaha-wareeriyo ee munaafiqiinta loo soo kiraystay, aan ka ahayn khasaara xoogan oo gumaysiga uu kala kulmo iyo kuwa u adeegaya ee xinqooqa dartii ku aakhiro seegi doona oo marka uu shacabka S.Ogadenya ka xoroobo gumaysiga darbiyada qab-qabsan doona.
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تبديلا .
F.G. Meela kala duwan oo nalooga soo qoray waxay yidhaahdeen dadkii yaqiinay Cabdi Iley dad badan oy saaxiibdiia ahaa unbuu ku galaaftay been abuur ah waxaan ahayn xubnaha qarsoon ee Dh/buur oo sidaa lagu xidhay isagana uu ku helay kalsoonidii 1aad ee sirdoonka Itobiya. Isaga tan iyo yaraantiisii wuxuu caan ku ahaa khiyaanada iyo waliba waalidkii oo habaaray.